🥇 ▷ Microsoft Surface Pro 7 iyo Surface Laptop 3 faahfaahinta kumbuyuutarka ✅
Microsoft ayaa shaaca ka qaadi doonta dhowr badeecooyin cusub oo cusub Oktoobar 2, oo ay ku jiraan khadka korka ee kiniiniyada jiilka xiga. Thanks to daabacaadda Windowsarea, faahfaahinta qaar ka mid ah alaabada cusub ee soo socota ayaa la ogaaday.
Sida laga soo xigtay isha, dhamaan noocyada Microsoft Surface Pro 7 waxay lahaan doonaan modem LTE modem ah. Aaladda qaarkood waxay ku salaysnaan doontaa jiilka 10-aad ee Intel Core processor, halka kuwa kalena lagu salayn doono 7nm Qualcomm Snapdragon 8cx. Waxaa xusid mudan in DisplayPort lagu beddeli doono deked USB-C ah. Laakiin maadaama ay ku sii xirnaan doonaan Surface Connect, dekada cusub ma taageeri doonto heerka ‘Thunderbolt 3’.
Microsoft Surface Laptop-ka 3
In Microsoft Surface Laptop 3, soosaaruhu wuxuu ka takhalusi doonaa ikhtiyaarka korka ee Surface Connect Surface. Moodhadhka oo dhan waxay la socon doonaan USB-C iyo dekedaha USB-A.
Sida laga soo xigtay Windowsarea, Surface Laptop 3 waxaa lagu dhejin doonaa kiis aluminium ah, iyada oo aan la helin faux suede. Nooca ganacsiga waa inuu sidoo kale ku jiraa SDD laga saari karo. Nooca dahabiga ah ee Laptop-ka Surface sidoo kale waa la heli doonaa. Ugu dambeyntiina: waa inaadan fileynin nooca AMD ee laptop-ka Microsoft waxay ka tagi doontaa borotokadaha shirkadahan kumbuyuutarrada lagu yaqaanno.